नेकपा फुट्न नदिन चिनियाँ सक्रियता !
काठमार्डौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद मत्थर पार्न चीनले देखाएको चासोलाई धेरैले विभिन्न कोणबाट हेरिरहेका छन् । आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधि टोलीले नेकपाका शीर्ष नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै भेटघाट गरिरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटको संघारमा रहेको छ ।
प्रचण्ड र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिबीच के के भयो कुराकानी ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तरराष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री क्वो ये चौले भेटवार्ता गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटारमा आज भएको भेटमा आपसी हित, दुई देशबीचको सम्बन्ध र दुई दलबीचका विविध आयामबारे विचारविमर्श भएको भएको थियो ।
एजेन्सी । चीनमा हरेक पाँचमध्ये एक व्यक्तिमा उच्च रक्तचापको समस्या देखिने गरेको तथा अरु रोगभन्दा रक्तचापबाट सबैभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ ।
नेपालमा कुन पार्टीको सरकार छ त्यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइनः चिनियाँ मिडिया ग्लोबल टाइम्स
एजेन्सी । नेपालमा भएको संसद विघटनलाई लिएर भारतले दिएको प्रतिक्रियालाई चीनले खण्डन गरेको छ । भारतको हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित एक समाचारलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ मिडिया ग्लोबल टाइम्सले आपत्ति जनाएको हो । उक्त भारतीय मिडियाले अनावश्यक रुपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा जोड्न खोजेको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ ।
चीन जाँचका लागि तयार, कहाँबाट फैलियो कोरोना भाइरस डब्लुएचओले पत्ता लगाउने
एजेन्सी । कोरोना भाइरस कहाँबाट सुरु भयो यो विषय आज पनि उत्तिकै गम्भिर रुपले सबैको अगाडि तेर्सिएको छ । कतिले चीनलाई दोष दिइरहेका छन् भने कतिपयले चीन नभई अन्य स्थानबाट कोरोना भाइरस सुरु भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
जर्मनीकी महिला सांसदले चीनलाई चिड्याउने काम गरिन्
एजेन्सी । जर्मनीकी महिला सांसद डेनिएला क्लर्कर्टले हङकङ, तिब्बत र ताइवानमा लोकतन्त्र बहालीका लागि माग गर्दै चलिरहेको आन्दोलनको समर्थन गरेकी छन् । उनले आफ्नो एक तस्बिर सोशल मिडियामा शेयर गर्दै ती तीन क्षेत्रको पक्षमा उभिएकी हुन् ।
चीनले कोभिडविरुद्धको खोप सर्वसाधारणका लागि छिट्टै खुला गर्ने
एजेन्सी । चीनले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई सर्वसाधारणको लागि आगामी केही हप्ताभित्र खुला गर्ने यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शुक्रबार बताएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चढ्ने कारको मुल्य कति ?
एजेन्सी । विश्वकै शक्तिशाली नेता हुन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ । उनले कस्तो खालको कार चढ्छन् त ? यो सबैको चासोको विषय हुनसक्छ ।
चन्द्रमाबाट माटो र ढुंगा ल्याउने अभियानमा चीनलाई सफलता